Global Voices teny Malagasy » Mampiseho ny krizin’ny COVID-19 ao amin’ny firenena ny Nepaley mpanao sariitatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2020 10:35 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, COVID-19
Nanomboka ny 24 Martsa, niditra tao anatin'ny fihibohana manerana ny firenena  i Nepal izay hifarana ny 27 Aprily. Toy ny any amin'ny firenena maro, nampiseho ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy nitsapa ny habetsaky ny foto-drafitrasan'ny governemanta ny valan'aretina COVID-19.
Anisan'izany ohatra ny andian’olona maro izay voatery nandao  ny Lohasahan'i Kathmandu an-tongotra ho any an-tanànakeliny, ny fitomboan'ny fanabeazana an-tserasera  sy ny fihariana an-tserasera , ny fiampangana herisetra ataon'ny polisy  rehefa miantsena hividy ny zavatra ilaina andavanandro ary ny maro hafa.
Naneho hevitra tamin'ny tatitra  momba ny famoretana ataon'ny polisy amin'ireo olom-pirenena voalaza fa nandika ny fepetran'ny fihibohana i Rajesh KC , mpanao sariitatra ara-politika any Kathmandu. Hoy ilay mpiambina ao amin'ilay sariitatra: ​​«Namono coronavirus 5 crore [1 crore = 10 tapitrisa] eto an-damosiny aho.”
Naneho ny fahorian'ireo mpiasa kely karama mandeha an-tongotra mody any an-tanànakeliny rehefa norarana ny fiara fitaterana i Rabi Mishra , mpanao sariitatra ao amin'ny fantsom-baovao Naya Patrika Daily . Nampiany teny kely avy amin'ilay mpihira sady mpikatroka ara-tsosialy JB Tuhure izany.
Basu Kshitiz , mpanao sariitatra sady mpanakanto ao amin'ny Annapurna Post , nanakiana ny valintenin'ny Governemanta Nepaley momba ny viriosy rehefa naneho ireo gidro telo manan-tsaina izay tsy mahalala zava-dratsy, tsy mandre zava-dratsy ary tsy miteny zava-dratsy.
Mampiseho lehilahy telo miaraka amin'ny valizy feno tsolotra mizotra mankany Singha Durbar , biraon'ny fitantanana any Nepal i Rabin Sayami , mpanao sariitatra ao amin'ny fantsom-baovao Nagarik .
Rabindra Manandhar , mpanao sariitatra miaraka amin'ny gazetiboky Nepal  nanao fanesoana tamin'ny fanaparitahana vaovao diso nataon'ny fampahalalam-baovao Indiana izay milaza fa nikasa hiditra ao India avy any Nepal ny andian'olona Miozolomana tratran'ny coronavirus.
Nanao hatsikana mampiseho ny karazan-dehilahy kamo mandany ny androny any an-trano nefa mitaraina momba ny fihibohana i Abin Shrestha , mpanao sariitatra ao amin'ny fantsom-baovao Kantipur .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/05/30/148107/
 fihibohana manerana ny firenena: https://kathmandupost.com/national/2020/03/23/nepal-goes-under-lockdown-for-a-week-starting-6am-tuesday
 For Nepal's migrant and daily wage workers, lockdown is more dangerous than the coronavirus: https://globalvoices.org/2020/04/19/for-nepals-migrant-and-daily-wage-workers-lockdown-is-more-dangerous-than-the-coronavirus/
 olona maro izay voatery nandao: https://www.nepalitimes.com/latest/walking-3-days-to-get-home/
 fanabeazana an-tserasera: https://english.onlinekhabar.com/with-more-online-classes-lockdown-may-lead-nepali-education-to-digital-transformation.html
 fihariana an-tserasera: https://thehimalayantimes.com/business/online-order-home-delivery-rise-amid-lockdown/
 herisetra ataon'ny polisy: https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nepal-police-investigating-case-of-viral-photo/
 Naya Patrika Daily: https://www.nayapatrikadaily.com/
 Annapurna Post: http://annapurnapost.com/